Labo wiil oo Shiinays ah oo bas hoostii ku safray 80km - BBC News Somali
28 Nofembar 2017
Lahaanshaha sawirka SOUTHERN MORNING POST
Image caption Sawir uu wargeys deegaankaas ka soo baxa soo dhigay ayaa muujinaya carruurta oo hoosta kaga dhagan baska
Sawirrada labo wiil oo Shiinays ah oo ku safray bas ay hoosta kaga dhageen oo ay 80km ku safreen ayay ka dhalatay caro onlineka lagu soo gudbiyay oo looga hadlayo badqabka "carruurta danyarta ah" ee dalkaas.
Macalinkooda ayaa 23ka Nofembar sheegay in wiilasha la'layahay , isla maalintaa ayaana la helay iyaga oo taayirada agtooda ku dhagan oo ku jira qaybta hoose ee baska.
"Waxay rabeen in ay waalidkood u tagaan"
Sida uu ku warramay wargeyska Southern Morning Post (Nanguo Zaobao), labada wiil ayaa ahaa siddeed ilaa sagaal jirro, waxaana helay laamaha ammaanka ka dib markii ay baska ku baareen boosteejo.
Carruur qaba HIV oo uusan isu badalin Aids 'iyaga oon dawo la siinin'
Ilaa saddex mayl ayay safarka ku jireen iyadoo uu baabuurku ku safrayay meel joogeedu kala sareeyo, shaqaaluhunu waxay sheegeen in ay "la yaabeen" in aysan waxba soo gaarin carruurta.
"Jirka carruurtu aad buu u yaraa, marka waxay heleen meel ay ku dhuuman karaan oo ku filan," sida uu wargayska u sheegay mid ka mid ah shaqaalaha baska.
Shaqaalaha ayaa sheegay in carruurtu ay diideen in ay hadlaan marka su'aalaha la waydiiyo, laakiin mid ka mid ah shaqaalaha ayaa wargeyska Morning Post u sheegay "in markii dambe ay ogaadeen in carruurtu ay u xiiseen hooyadood iyo aabahood.